इस्मा गाउँपालिकाद्वारा दुध र मासुमा अनुदान, उत्कृष्ठ काम गर्ने ६८ कृषक पुरस्कृत - Butwal Online
गुल्मी, ८ भदौ । इस्मा गाउँपालिकाले उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा वडा नम्बर ६ अम्मरपुरका ५१ किसानकाले विक्रि गरेको खसिबोका र १७ किसानले उत्पादन गरेको दुधमा कुल एक लाख ७५ हजार ७०० अनुदान प्रदान गरेको हो । विक्रि भएको मासु तथा दुध सबै अम्मरपुरस्थित ‘अमरपुर कृषि तथा पशु विकास महिला सहकारी संस्था लिमिडेट’ द्धारा विक्रि भएका हुन् ।
गत आर्थिक बर्ष अम्मरपुरका १७ किसानले दुई हजार ५५ केजीका ६० वटा खसिबोका विक्रि गरे । जसबाट किसानले कुल ५१ हजार ३७५ अनुदान प्राप्त गरे । सबैभन्दा धेरै स्थानीय विष्णुमाया भण्डारीले पाचँ खसिबोका विक्रि गरिन् । जसबाट पाचँ हजार ७५ रुपैँया प्राप्त गरेकी छन् । गत बर्ष नै उक्त सहकारीबाट कुल २४ हजार ८६४ दुध विक्रि भयो ।
जसबाट कुल एक लाख २४ हजार ३२५ किसानले अनुदान प्राप्त गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै स्थानीय कमला घिमिरेले अनुदान प्राप्त गरेकी छन् । उनले सात हजार ३४३ लिटर दुध विक्रिबाट कुल ३६ हजार ७१५ प्राप्त गरेकी छन् । त्यस्तै दुर्पता भण्डारीले तीन हजार २०२ लिटर दुध सहकारीमार्फत विक्रि गरी १६ हजार १० प्राप्त गरेकी छन् । अर्की स्थानीय जमुना पराजुलीले तीन हजार १४९ लिटर दुध विक्रिबाट १५ हजार ७४५ तथा पशुपति अर्यालले तीन हजार ४२ लिटर दुध विक्रिबाट १५ हजार २१० प्राप्त गरेको सहकारीले जनाएको छ ।
अम्मरपुरसहित तत्कालिन ६ गा.वि.स. मा वि.सं २०७२ सालमा हेफर इन्टरनेशनल परियोजना लागु भयो । उक्त परियोजनाले किसानहरुको समुह गठन, मासिक बचत संकलन, बाख्रा वितरण, तालिम लगायतका कार्यक्रम ग¥र्यो । र अन्त्यमा सहकारी गठन गरी अहिले किसानले उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरुलाई सहकारीमार्फत विक्रि वितरण हुदैँ आएको एकिकृत ग्रामिण विकास समाज गुल्मीका अध्यक्ष हिरा ए.सी.ले जानकारी दिए ।
अमरपुर कृषि तथा पशु विकास महिला सहकारी लिमिटेडले एक बर्षमै आफ्नो पुँजी ५६ लाख ७५ हजार ९६१ पु¥र्याएको छ । पछिल्लो समय कतिपय सहकारी धरासायी समेत बन्ने गरेको अवस्थामा यस सहकारीले भने कारोबार रकम बृद्धि गर्न सफल भएको सँस्थाकी अध्यक्ष देवकला थापाले जानकारी दिइन् ।
त्यसमा आम्दानीका मुख्य स्रोतमध्ये खसि–बोका विक्रिबाट नौ लाख १८ हजार ८२२ प्राप्त भएको छ । त्यस्तै शेयर पुँजी छ लाख ४५ हजार ५००, बचत हिसाब १७ लाख ४८ हजार ५७६, प्रशासनिक अनुदान तीन लाख चार हजार ४२०, दाना विक्रिबाट ७४ हजार ६६० लगायतका शिर्षकबाट आम्दानी भएको अध्यक्ष थापाले बताइन् ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिमला खत्रीले अमरपुरमा खसि–बोका विक्रिको लागि भण्डार केन्द्रको स्थापना गर्ने बताइन् । आफु पनि महिला भएको र सहकारीको उदेश्य पनि महिलालाई नै आत्मनिर्भर बनाउने रहेकोले अमरपुरमा गाउँपालिकाले भण्डार केन्द्र बनाउने प्रतिवद्धता जायर गरिन् ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष लक्षमण पराजुलीले मिलेर काम गर्न सबैलाई आग्रह गरे । ‘एक्लै दौडेर हुँदैन, मिलेर काम गरे सफलता मिल्छ भन्ने उदाहरण दिनुभएको छ ।’ उनले भने, ‘आवश्यक सहयोग सबैबाट हुनेछ ।’
इस्मा गाउँपालिकाले उत्पादनमा बृद्धि गरी किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान’ कार्यक्रम सुरु गरेको हो । जसअन्तरत बर्षमा १०० के.जी. खसि या बोकाको मासु विक्रि गर्ने किसानलाई प्रति के.जी. २५ रुपैँया गाउँपालिबाट उपलब्ध गराइने गाउँपालिका अध्यक्ष लक्षमण विष्टले जानकारी दिए ।
त्यस्तै महिनामा ५० लिटरभन्दा बढी दुध विक्रि गर्ने किसानलाई प्रति लिटर रु. ५ का दरले अनुदान प्रदान गरिने पनि विष्टले बताए । तर यस्तो अनुदानको लागि भने सहकारीमार्फत काम गर्नुपर्नेछ । गत आर्थिक बर्ष इस्मा गाउँपालिकाका दुई सहकारी उत्पादनमा आधारित अनुदानको लागि योग्य भए । इस्मा कृषि तथा पशु विकास महिला सहकारी र अमरपुर कृषि तथा पशु विकास महिला सहकारी लिमिडेटले अनुदान प्राप्त गरेको अध्यक्ष विष्टले जानकारी दिए ।